Taariikhda My Butros » Instant Checkmate ee Guide Si ka gashatid Madow Online Daters
by Taagin Logan
Instant Checkmate ee Guide Si ka gashatid Madow Online Daters
Last updated: Oct. 28 2020 | 3 min akhri
Mararka qaarkood ayey quudarreynayana dareenka. Mararka qaarkood ay suxufiyiinta isku daygooda in ay hal dhibic ka. Mararka qaarkood ay doonayaan inay fadeexad kaliya aad. Wax kasta oo dhiirogelin waa, waslad weyn oo shukaansi profile online yihiin faalsada ah dhameystiran - profiles khayaalka loogu talagalay ay dhaceen daters online daacad ah. Oo haddii aadan isha ku hay, aad noqon kartaa dhibanaha ee soo socota.
Falkani har, loogu magac daray sida catfishing, waqti iyo lacag qashinka ee dadka maalin kasta. Iyada oo intooda badani ah daters online jira dad cajiib ah, waxaa jira ukunta xun yar halkaas. Nasiib wanaag, huffan oo online u muuqdaan in aanay in uu noqdo mindiyo ugu darnayd ee khaanadda, si ay inta badan sameeyaan qaladaad fudud in caarada off ay khiyaano. Haddii aad rabto in aad loo hubiyo in taariikhda xigta waa heshiis dhabta ah, sii tilmaamahan fudud ku hay inta aad safarka online xagga hindiga.
1) Orod A Search Image loo beddelo
Xisaabta A been abuur ah ayaa sidoo kale ka dhigan tahay been abuur sawiro. Marka dulma online dhiso been abuur ah online profile, caadi ahaan waxay ku qabsoomayn doonaa sawiro ay ka heli off internetka. Gaar ahaan, kuwa si ay ugu helaan ay ka dib Google "nin kulul" ama "Gabar kulul." xitaa Waxay headshots geliyaan doonaa goobaha Model in ay profile ka dhigi doontaa sida loo qurxiyay sida ugu macquulsan. Miyaan lagu siri. Hab fudud si ay u arkaan haddii ay sawir online mar labaad waa by Google search a image ka horjeedaan ordaya. Haddii ay profile sawir la malaasay dhan internetka, ama haddii sawirka cad leeyahay qof kale, aad u ogaato aad heshay catfisher ku gacmahaaga.
2) Fiiri Wixii adag English
Haddii ay profile iyaga ka dhigaa inay u muuqdaan sida ay dhashay oo ku koray dalalka ku, laakiin ay naxwaha u muuqataa sidii qof kaliya barashada luuqada, taasina waa calanka weyn oo cas. Huffan oo shukaansi Online marar badan yihiin wadamada dibadda. Waxay ku dhaheen in ay tahay sida American sida Mount Rushmore, laakiin xaqiiqdu waxay sheegeen in si ay u qaadato lacag American. Haddii aad paramour online joogto ah ka dhigaysa higaada iyo naxwaha qalad in aan duuli lahaa fasalka dhexdiisa ah fasalka 3aad, ay tahay in ay tahay scammer ajnabi ah.
3) Ma An Background Check Online
Diiwaanka Public diyaar u yihiin inay qof walba oo doonaya in uu iyaga ka aragtid. Sidaas darteed haddii qofka online aad la xiriiray waxa uu ku dhashay dalka Mareykanka, waa in ay leeyihiin faylka diiwaanka dadweynaha. Search magacooda, Culaysyadoodii la jira gobolka, ee internetka ah diiwaanka dadweynaha search. Haddii aan waxba soo, in ay calaamad u tahay in ay aan si buuxda u daacad ah aad la.
4) Iska ilaali Wadayaasha Fast
Haddii qof doonayo inuu online boodaan ee "Helitaanka si aad u ogaato" oo taga si toos ah u geliyey "Soulmates nolosha" stage of xiriirka, ma laga yaabaa in maxaa yeelay waxa ay tahay jaceyl dareen. Waxaa laga yaabaa inay sababto waxa ay tahay xiiso boorsada jeebka ka badan qalbigaaga. Tan iyo kuwa huffan oo online lagu dhiiri galiyo si ay u helaan jacaylkiinna oo sida ugu dhaqsaha badan, ay u guuraan doonaa super dhakhso. Shakin karo si dhakhso ah. Haddii aad qabto ah ee romantic-online dabayl cirwareen, qaadan labaad si aad yarayso oo ku hubin in wax kasta ay leedahay waa run.
5) Eeg hadii ay doonayaan inay Chat Online Kaliya
Ma 100% ee isgaarsiinta sameeyey iyada oo email iyo text? Diidmada A inaad wacdo ama la kulmaan fool ka fool tilmaamaya laga yaabaa in ka badan xishood xad dhaaf ah. Waxaa suuragal ah in ay u doonayaan in ay ku siiyaan wax shaki beentooda. Transparency waa furaha xiriirka wanaagsan. Haddii aanay si cad u kugula xiriiri karo, qaato in sida calaamad aanay xiiso aad ee jira oo dhan.
Ugu dambeyntii, haddii aad adaaegatada by scammer internetka ah oo ay aad ku kacey out of wax lacag ah, u sheeg in ay dawladda ee federaalka Xarunta Dacwadaha Fal Dambiyeedka Internetka. Waxaa laga yaabaa in waxoogaa laga xishoodo in la qirto in aad la siri, laakiin warbixinta ayaa kaa caawin doona dadka kale looga hortago uga ilaaliso dhacay nin.
Toban Tilaabooyinka Hosting a Singles Ciyaarihii Party
3 Secrets in Dating on Miisaaniyadda Student ah
Dating – Ma Waxaad shirqoolaan Naftaada?